घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » गेस्टपोस्ट » तपाइँ कसरी भिडियो बफरिंग समस्या रोक्न सक्नुहुन्छ?
सारांश: हामी मध्ये धेरै जसो हाम्रो स्मार्टफोन र ल्यापटप ब्राउजर को रूप मा काम को रूप मा मनोरन्जन उद्देश्य को लागी प्रयोग गरीन्छ। जब यो मनोरन्जन को लागी आउँछ, चलचित्रहरु, यूट्यूब भिडियोहरु, र अपलोड गरिएको भिडियो कथाहरु र लोकप्रिय सामाजिक प्लेटफार्महरुमा रीलहरु हाम्रो जाने छनौट हो। तर के तपाइँ कहिल्यै भिडियो बफरिंग मुद्दाहरुको सामना गर्नुभएको छ जब सामग्री अनलाइन स्ट्रीमिंग? यो सबैभन्दा कष्टप्रद कुरा होइन? खैर, अब छैन! यस लेखले तपाइँलाई केहि ह्याक्स मा दिनेछ कि तपाइँ सजीलै संग कुनै पनी प्लेटफर्म मा भिडियो बफरिंग मुद्दाहरु लाई ठीक गर्न को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँ नियमित रूप बाट अनलाइन सामग्री हेर्नुहुन्छ, तपाइँ केहि समय मा डरलाग्दो भिडियो बफरिंग चिन्ह भेट्नु भएको छ।
त्यो लगातार कताई सर्कल सम्भवतः अन्तिम चीज हो जुन तपाइँ देख्न चाहानुहुन्छ जब तपाइँ शान्तिपूर्वक सप्ताहन्त मा पपकर्नको एक टब संग एक फिल्म को आनन्द उठाउने कोशिश गर्दै हुनुहुन्छ।
यो तपाइँको लागी सम्पूर्ण अनुभव बिगार्न सक्छ।
तर के तपाइँ कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि यो किन हुन्छ? निस्सन्देह, ढिलो इन्टरनेट गति ढिलो संग खेल्ने भिडियो को लागी एक कारण हो, तर त्यहाँ मुद्दा को पछाडि धेरै कारणहरु हुन सक्छ? यसबाहेक, के तपाइँ यसलाई हटाउन केहि गर्न सक्नुहुन्छ? हामी संग जुड्नुहोस् हामी तपाइँलाई कसरी एक पटक र सबै को लागी भिडियो बफरिंग समस्याहरु लाई रोक्न को लागी देखाउँछौं।
पहिलो कुरा पहिलो - भिडियो बफर किन?
जब तपाइँ सीधा इन्टरनेट बाट एक भिडियो स्ट्रिमि गर्दै हुनुहुन्छ, भिडियो तपाइँको स्थानीय भण्डारण मा सुरक्षित छैन तर एक क्लाउड सर्भर मा। यो वास्तविक समय मा डाटा को रूप मा डाउनलोड गरीएको छ र तपाइँको उपकरण मा खेलेको छ। डाउनलोड मा कुनै ढिलाइ वा बाधा भिडियो ढिलो वा प्लेब्याक को समयमा अटक गर्न को लागी, तपाइँ स्क्रीन मा एक लोडिंग प्रतीक हेर्न को लागी बाध्य गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रक्रिया "बफरिंग," उपकरण को मेमोरी बफर मा भिडियो preloading को एक तंत्र भनिन्छ।
आदर्श रूप मा, भिडियो को लोडिंग यति सजीलो हुनु पर्छ कि अन्त्य-प्रयोगकर्ता प्लेब्याक को दौरान कुनै ग्लिचहरु पाउँदैनन्। तर यो निम्न कारणहरु को कारणले गर्दा हरेक पटक हुदैन:
अपर्याप्त इन्टरनेट गति
हो, गति महत्त्वपूर्ण छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु अक्सर कठिन लडाईहरु मा संलग्न, प्रयोगकर्ताहरु लाई यो धेरै कारण को लागी उच्चतम गति डाटा डाउनलोड को वादा। यदि तपाइँको इन्टरनेट जडान को ब्यान्डविड्थ पर्याप्त उच्च छैन, तपाइँ प्राय: भिडियो बफरिंग मुद्दाहरु बाट ग्रस्त हुनुहुन्छ। तपाइँ यो मुद्दा को सामना गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाइँको मोडेम वा राउटर पुरानो हो वा ठीक तरिकाले काम गरीरहेको छैन। एकै नेटवर्क मा जोडिएको धेरै धेरै उपकरणहरु लाई एक साथ यो त्रुटि फ्याँक्न सक्छ।
तपाइँ अन्तिम पटक तपाइँको राउटर अपग्रेड गर्नुभयो? जबकि नवीनतम संस्करण को लागी तपाइँको राउटर अपडेट गर्न को लागी राम्रो छ, पुरानो फर्मवेयर राउटर को उपयोग कहिलेकाहिँ मुद्दाहरुको एक स्रोत हो। जाँच गर्नुहोस् कि यदि तपाइँको राउटर को विशिष्टताहरु तपाइँको ISP प्रदान गरीरहेको छ मेल खान्छ। यस संगै, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँको कम्प्यूटर पुरानो नेटवर्क ड्राइभरहरु, क्षतिग्रस्त ग्राफिक कार्ड ड्राइभ, एक दोषपूर्ण वेब ब्राउजर, आदि जस्तै कुनै समस्याहरु को सामना गरीरहेको छैन।
मा सार्दै, अब कसरी सरल समाधान को उपयोग गरेर भिडियो बफरिंग ठीक गर्न को लागी हेर्न को लागी कोशिश गरौं।
कसरी भिडियो बफरिंग रोक्न
त्यहाँ भिडियो बफरिंग समस्या को लागी धेरै समाधानहरु छन्, त्यसैले यो सरल म्यानुअल फिक्स (पहिलो सूचीबद्ध) बाट शुरू गर्न को लागी सल्लाह दिईन्छ र त्यसपछि अर्को मा सार्नुहोस् यदि अघिल्लो एक काम गर्दैन।
१. आफ्नो इन्टरनेट गति जाँच गर्नुहोस्
यदि धेरै सदस्यहरु तपाइँको घर मा इन्टरनेट को उपयोग गरी रहेछ, तपाइँ स्वाभाविक रूप मा एक उच्च गति कनेक्शन को जरूरत छ, जो एक साथ धेरै उपकरणहरु लाई राम्रो गुणस्तरीय सर्फि support लाई समर्थन गर्न सक्छ। जाँच गर्न को लागी कती गति तपाइँको उपकरण (जसमा भिडियो बफरिंग छ) प्राप्त गरीरहेको छ, तपाइँको वेब ब्राउजर को उपयोग गरेर एक साधारण इन्टरनेट गति परीक्षण संचालन गर्नुहोस्। यदि गति तपाइँलाई चाहिने भन्दा कम छ, एक राम्रो ब्यान्डविड्थ योजना को लागी तपाइँको ISP लाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
2. पृष्ठभूमि मा चलिरहेको कार्यक्रम बाट बाहिर निस्कनुहोस्
यदि तपाइँ तपाइँको कम्प्युटर मा बफरिंग मुद्दाहरुको सामना गर्नुहुन्छ, टास्क प्रबन्धक को माध्यम बाट तपाइँको प्रणाली को वर्तमान लोड जाँच गर्नुहोस्। यदि तपाइँको कम्प्युटर कार्यहरु र उच्च मेमोरी उपयोग देखाईरहेको संग अतिभारित छ, तपाइँ स्ट्रिम भिडियोहरुमा एक राम्रो प्लेब्याक प्राप्त गर्नुहुन्न। किनभने कम्प्यूटर को संसाधनहरु कहीं कब्जा गरीएको छ, यो सजीलो संग यो भिडियो को रूप मा स्ट्रिम गर्दैन। मुद्दा को पार गर्न को लागी, प्रक्रियाहरु को सूची को माध्यम बाट स्क्रोल गर्नुहोस् र ती व्यक्तिहरु कि धेरै संसाधनहरु उपभोग गरीरहेछन्। यदि तपाइँ तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्न भने, उनीहरुलाई एक पटक उनीहरु मा क्लिक गरेर चयन गर्नुहोस्, र त्यसपछि हिट गर्नुहोस् "अन्त्य कार्य" बटन यस्तो प्रक्रियाहरु लाई समाप्त गर्न को लागी।
पृष्ठभूमिमा चलिरहेको संसाधन गहन प्रक्रियाहरु बन्द गर्नुहोस्
३. भिडियो क्वालिटी कम गर्दै हुनुहुन्छ
यो कुनै गोप्य छैन कि एक उच्च संकल्प भिडियो फाइल आकार मा ठूलो छ। अब ठूलो एक भिडियो को आकार, अधिक समय र शक्ति यो इन्टरनेट भर मा स्ट्रिम गर्न को लागी लिनेछ। तेसैले थोरै हेर्ने अनुभव सुधार गर्न को लागी, भिडियो को एक कम संकल्प संस्करण हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाइँ नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, र अन्य प्लेटफर्महरु मा हेर्न चाहानु भएको भिडियो संकल्प को बीच छनौट गर्न को लागी विकल्प पाउन सक्नुहुन्छ।
तपाइँले हेरिरहनुभएको भिडियोको गुणस्तर घटाउनुहोस्
4. तपाइँको उपकरणमा भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस्
यदि अरु केहि काम गर्दैन, सबै भन्दा राम्रो समाधान तपाइँको स्थानीय भण्डारण को लागी भिडियो डाउनलोड गर्न को लागी हुनेछ। यस तरीकाले, कम्तिमा एक पटक डाउनलोड पूरा भएपछि, तपाइँ यसलाई बाधा बिना हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ पनी केहि मिनेट को लागी स्ट्रीम लाई पज गरी एक ठूलो बफर बनाउन को लागी सब भन्दा सजिलो र सब भन्दा छिटो ह्याक कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि पछि पुन: सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाइँको उपकरणमा भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस् वा ठुलो बफर बनाउन को लागी पज गर्नुहोस्
भिडियो डाउनलोड गर्नुभयो तर यो अझै पनी काम गर्दैन? यो प्रयास गर्नुस्!
यदि तपाइँले कोशिश गर्नुभयो र भिडियो डाउनलोड गर्ने चाल को परीक्षण गरीयो तर यो अझै पनी सुचारु रूपमा खेलिरहेको छैन, मूल अपलोड गरिएको फाइल क्षतिग्रस्त वा भ्रष्ट हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा, यो एक विश्वसनीय र कुशल संग मरम्मत भिडियो मर्मत उपकरण सिफारिस गरिएको छ।
हाम्रो राय मा, भिडियो को लागी तारकीय मर्मत यस परिदृश्य मा सबै भन्दा राम्रो विकल्प हो। कुनै पनि ढाँचा को भ्रष्ट भिडियो लड्न, यो सफ्टवेयर "कसरी भिडियो बफरिंग रोक्न" मुद्दा को लागी सबैभन्दा राम्रो जवाफ हो। उपकरण एक सरल 3-चरण दृष्टिकोण पछ्याउँछ। यो एक सहज इन्टरफेस को साथ आउँछ जुन यो संग धेरै सजिलो संग काम गर्दछ।
यो कसरी तपाइँ भिडियो बफरिंग फिक्स गर्न को लागी यो उपकरण को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ:
भिडियो को लागी तारकीय मर्मत को लागी आधिकारिक उत्पादन पृष्ठ मा टाउको र मा क्लिक गर्नुहोस् "नि: शुल्क डाउनलोड" लिङ्क।
फाइल डाउनलोड गरिसकेपछि, अनुप्रयोग स्थापना गर्न डबल क्लिक गर्नुहोस्।
एक पटक स्थापना पूरा भएपछि, भिडियो को लागी तारकीय मर्मत शुरू।
सफ्टवेयर को इन्टरफेस मा, बक्स मा भन्छन् कि मा क्लिक गर्नुहोस् "फाइल थप्नुहोस्" मर्मत गर्न को लागी आवश्यक छ कि भिडियो फाइल थप्न को लागी। तपाइँ यहाँ धेरै फाइलहरु थप्न सक्नुहुन्छ।
भिडियो घर स्क्रीन को लागी तारकीय मर्मत (https://www.stellarinfo.com/onlinehelp/en/stellar-repair-for-video-win-4/)
उपकरणमा फाइलहरु थपे पछि, मा क्लिक गर्नुहोस् "मर्मत गर्नुहोस्" मर्मत प्रक्रिया सुरु गर्न बटन।
भिडियो फाइलहरु को लागी मर्मत गर्न को लागी तारकीय मर्मत जोडियो (https://www.stellarinfo.com/onlinehelp/en/stellar-repair-for-video-win-4/)
एक प्रगति पट्टी प्रक्रिया को कति पूरा गरीएको छ देखाउन को लागी प्रदर्शित गरिनेछ।
भिडियो मर्मत प्रगति को लागी तारकीय मर्मत
पछि भिडियो फाइलहरु मर्मत गरीएको छ, तपाइँ उनीहरुलाई तपाइँको कम्प्युटरमा बचत गर्नु अघि उनीहरुको पूर्वावलोकन गर्न सक्नुहुन्छ।
बचत गर्नु अघि भिडियो पूर्वावलोकन भिडियो को लागी तारकीय मर्मत (https://www.stellarinfo.com/onlinehelp/en/stellar-repair-for-video-win-4/)
पछि डाउनलोड भिडियो फाइल मर्मत गरीएको छ, यसलाई खेल्ने प्रयास गर्नुहोस्। आदर्श रूप मा, तपाइँ अब कुनै भिडियो बफरिंग मुद्दाहरु को सामना गर्नुहुन्न।
भिडियो बफरिंग एक मुद्दा हो कि प्रत्येक अनलाइन सामग्री स्ट्रीमर पीडा छ। तर धन्यबाद, अब त्यहाँ मुद्दा को लागी एक उपाय छ! तपाइँको इन्टरनेट को गति र बन्द पृष्ठभूमि अनुप्रयोगहरु को जाँच को अतिरिक्त, तपाइँको स्थानीय प्रणाली मा भिडियो डाउनलोड गर्न को लागी पनि प्रयास गर्न सकिन्छ। यदि डाउनलोड गरिएको भिडियो पनि प्ले गर्न असफल भयो, भिडियो बफरिंग फिक्स गर्न को लागी भिडियो को लागी तारकीय मरम्मत जस्तै यो उपकरण संग मर्मत गर्न संकोच नगर्नुहोस्।